Yiziphi Izinhlobo Zewebhu (Okumnyama, Okujulile, Okungaphezulu, Nokucacile)? | Martech Zone
Yiziphi Izinhlobo Zewebhu (Okumnyama, Okujulile, Okungaphezulu, Nokucacile)?
NgoMgqibelo, Januwari 2, 2021 NgoLwesihlanu, Mashi 5, 2021 Douglas Karr
Asivame ukuxoxa ngokuphepha okuku-inthanethi noma I-Web Dark. Ngenkathi izinkampani zenze umsebenzi omuhle wokuvikela amanethiwekhi wazo angaphakathi, ukusebenza ekhaya kuvule amabhizinisi kwezinye izinsongo zokungenelwa nokugenca.
Izinkampani ezingama-20% zathi zibhekene nokwephulwa kwezokuphepha ngenxa yesisebenzi esikude.
Ukukhuthazela ekhaya: Umthelela we-COVID-19 ekuvikelekeni kwebhizinisi
I-cybersecurity ayiseyona nje umthwalo we-CTO. Njengoba ukwethembana kuyimali ebaluleke kakhulu kuwebhu, kubalulekile ukuthi abaphathi bezentengiso bakhe ukuzazi kwabo ngobungozi nokuthi bangaphatha kanjani noma yiziphi izinkinga zobudlelwano bomphakathi ezingalandela ukuwa. Futhi, ngamaqembu wokumaketha asebenza kude nemininingwane yamakhasimende ayigugu… ithuba lokwephula ezokuphepha lenyuke kakhulu.
Izinhlobo Zewebhu Ejulile
I-Intanethi ihlukaniswe ngokukhululekile ezifundeni ezi-3 kuya ngokuthi ulwazi lutholakala kanjani:
Sula iwebhu noma i-Surface Web - isifunda se-Inthanethi iningi lethu esilijwayele, lokhu kungamakhasi ewebhu afinyeleleka esidlangalaleni akhonjiswe kakhulu ezinjini zokusesha.
Konke esingakuthola kuzinjini zokusesha kwakha i-4% kuphela kwe-10% yewebhu.
IWebhu Ejulile - I-Deep Web yizifunda ze-Intanethi ezifihliwe emphakathini kodwa ezingahloselwe umsebenzi onobungozi. I-imeyili yakho, ngokwesibonelo, yi-Deep Web (ayikhonjiswanga izinjini zokusesha kepha ifinyeleleka ngokuphelele). Amapulatifomu we-Marketing SaaS, ngokwesibonelo, akhiwe kwiwebhu ejulile. Zidinga ubuqiniso ukufinyelela imininingwane engaphakathi. I-96% ye-Intanethi yiWebhu Ejulile.
I-Web Dark - ngaphakathi kwe- IWebhu Ejulile yizifunda ze-Intanethi ezifihliwe ngenhloso nangokuphephile ekubukweni. Yindawo yewebhu lapho ukungaziwa kubalulekile khona ngakho ubugebengu budlangile. Idatha ephuliwe, ubugebengu obungekho emthethweni, kanye nemidiya engekho emthethweni kungatholakala, kuthengwe, kuthengiswe lapha. Sekuvele kunemibiko ye- Imishanguzo ye-COVID-19 iyathengiswa kwiWebhu Emnyama!
Kuchazwa IWebhu Elimnyama
Kubalulekile ukusho ukuthi iWebhu Emnyama ayiyona nje eyokwenza ubugebengu… futhi inika abantu amandla ngokungaziwa. Emazweni avimbela ukukhuluma ngokukhululeka noma aqapha ngokucophelela ukuxhumana kwezakhamuzi zawo, iWebhu Emnyama ingaba isango labo lokungahlolisiswa nokuthola imininingwane engasatshalaliswa noma esetshenziswe nguhulumeni. I-Facebook, ngokwesibonelo, iyatholakala nge-Web Emnyama.
Ingxenyana encane yabasebenzisi emhlabeni jikelele (∼6.7%) kungenzeka ukuthi basebenzise iWebhu Emnyama ngezinhloso ezinonya ngosuku olumaphakathi.
Umthombo: Izingozi ezingaba khona zenqwaba yenethiwekhi yeTor ngokungaziwa ngokulingana emazweni akhululekile
Ezweni elikhululekile elinenkulumo yamahhala, akuyona nje indawo umuntu adinga ukuba kuyo, noma kunjalo. Emashumini amathathu eminyaka ngisebenzile ku-inthanethi, angikaze ngibe nesidingo sokuvakashela iWebhu Emnyama futhi cishe angisoze.
Bangena Kanjani Abasebenzisi KuWebhu Emnyama
Ukufinyelela okuvame kakhulu kwiWebhu Emnyama kungokusebenzisa i- Inethiwekhi ye-Tor. Tor kufushane I-onion router. I-Tor yinhlangano engenzi nzuzo ecwaninga futhi ithuthukise amathuluzi wobumfihlo aku-inthanethi. Iziphequluli ze-Tor zifihla umsebenzi wakho we-inthanethi futhi ungahle udinge nokuthi umenywe ukufinyelela ezizindeni ezithile ze -onion ngaphakathi kweWebhu Emnyama.
Lokhu kufezwa ngokugoqa konke ukuxhumana ngezendlalelo eziningi zokubethela ezithuthwa ngamaphoyinti amaningi womzila. Ukuxhumana nge-Tor kuqala ngokungahleliwe kwenye yezindawo zokungena ezifakwe kuhlu esidlangalaleni, kugxilisa lelo thrafikhi ngokudluliswa okukhethwe ngokungahleliwe, futhi ekugcineni kuxazululeke isicelo sakho nempendulo yakho nge-node yokugcina yokuphuma.
Kukhona neziza zokusesha izinsiza ngisho neWebhu Emnyama. Ezinye zingafinyeleleka ngesigaba sesiphequluli esijwayelekile… ezinye izinkomba zesitayela se-Wiki ezihlanganiswe abasebenzisi. Abanye basebenzisa i-AI ukukhomba nokukhipha imininingwane engekho emthethweni… abanye bavulekele ukukhomba konke.
Ukuqapha Okumnyama Kwewebhu
Iningi lemininingwane yobugebengu ethengwa futhi ithengiswe kuwebhu emnyama imininingwane ephuliwe, izidakamizwa, izikhali nezinto ezingumkokotelo. Abasebenzisi basebenzisa i-crytpocurrency ukwenza konke ukuthengiselana kwemali kusatshalalisiwe futhi kungaziwa.
AbakwaBrands abafuni ukuthola idatha yabo ephuliwe kwiWebhu Emnyama… kuyiphupho elibi le-PR. Bangu ukuqapha kwewebhu okumnyama izixazululo laphaya zemikhiqizo futhi kungenzeka ukuthi usuvele ubhekiwe ezinye izinhlangano ukuthola imininingwane yakho yangasese.
Eqinisweni, lapho ngisebenzisa i-iPhone yami ukungena ngemvume kusayithi nokugcina iphasiwedi yami nge-Keychain, i-Apple wangixwayisa lapho elinye lamaphasiwedi wami litholakala kwephulwa… futhi lincoma ukuthi liguqulwe.
Gcina yonke i-software yakho isesikhathini, hhayi nje isoftware yakho elwa namagciwane.
Sebenzisa amaphasiwedi amaningi aqinile - awunawo iphasiwedi eyodwa yakho konke. Ipulatifomu yokuphathwa kwephasiwedi efana ne- Dashlane kusebenza kahle kulokhu.
Sebenzisa i-VPN - amanethiwekhi angenantambo asesidlangalaleni nasekhaya angahle aphephe njengoba ucabanga. Sebenzisa I-software ye-VPN ukusungula ukuxhumana kwenethiwekhi okuphephile.
Hlola zonke izilungiselelo zakho zobumfihlo kuma-akhawunti wakho wezokuxhumana bese unika amandla ukungena ngemvume kwezinto ezimbili noma eziningi lapho ungakhona.
Anginayo i-akhawunti eyodwa ebucayi engingadingi ukuthi ngiqale ngifake iphasiwedi yami bese ngithola umushwana wokungena wesibili obhalelwe ifoni yami noma ngibheke phezulu ngohlelo lokusebenza lokufakazela ubuqiniso lweselula. Lokho kusho ukuthi, ngenkathi isigebengu singathola igama lakho lomsebenzisi nephasiwedi, kuzofanele bakwazi ukufinyelela kudivayisi yakho yeselula ukubuyisa umushwana wokungena ngomlayezo wombhalo noma ngohlelo lokufakazela ubuqiniso.
Bheka okhiye noma i-HTTPS ewindini lesiphequluli sakho - ikakhulukazi lapho uthenga ku-inthanethi. Lokho kuyinkomba yokuthi unokuxhumana okuphephile, okubetheliwe phakathi kwesiphequluli sakho nendawo oya kuyo. Lokhu ngokuyisisekelo kusho ukuthi othile ozibona ethontelana kunethiwekhi yakho akakwazi ukubona imininingwane oyidlulisa uye emuva naphambili.
Ungavuli noma ulande okunamathiselwe kusuka kumakheli we-imeyili angaziwa.
Ungachofozi noma yiziphi izixhumanisi ngaphakathi kwemiyalezo ye-imeyili uma ungamazi umthumeli.
Qiniseka ukuthi i-VPN yakho ne-firewall kunikwe amandla.
Yiba nomkhawulo obekiwe ekhadini lakho lesikweletu lokuthengiselana okuku-inthanethi.
Uma uyibhizinisi futhi waziswe ngokuphulwa kwedatha nolwazi olutholakala kwi-Web Web, phaka i-a Isu lokuxhumana nobunzima be-PR ngokushesha, yazisa amakhasimende akho ngokushesha, futhi uwasize anciphise noma iyiphi ingozi yomuntu siqu.
Ukudalula: Ngisebenzisa izixhumanisi ezihambisanayo zezinsizakalo zangaphandle kule ndatshana.
Tags: abameli be-cartwrightsula iwebhuubumnyama obumnyamaiwebhu ejulileamaphasiwedinokuvikelekaingaphezulu lewebhuinethiwekhi anyanisitorinethiwekhi ye-torubuqiniso bokubiliVpnisoftware ye-vpnkuyiniyini ecacile kuwebhuyini iwebhu emnyamayini iwebhu ejulileyini iwebhu engaphezulu
Ukubona komkhiqizo kuyisihluthulelo sokumaketha okuphumelelayo
Feb 10, 2021 ngo-11: 51 PM
IWebhu Emnyama yingxenye eyingozi ye-Intanethi